UPitso uthi ngeke ayikhulume ekaBrockie | News24
UPitso uthi ngeke ayikhulume ekaBrockie
Johannesburg - Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uPitso Mosimane umile kwelokuthi bazoqhubeka nemizamo yokusayinisa abanye abadlali abathathu kule nyanga kodwa akafunanga ukuphawula ngodaba lukaJeremy Brockie.
AmaBrazilians kuze kube manje asasayinise u-Aubrey Ngoma obedlalela iCape Town City kodwa ngemuva kokwehlula ngo-2-1 i-Ajax Cape Town, uMosimane uzwakalise isifiso sakhe sokuthola abanye abadlali abathathu.
“Ngasho phambilini, le midlalo sizilungiselela ngayo eyeChampions League. Ngakho ngicabaga ukuthi kusenabadlali abathathu abasazoza,” kusho uMosimane ekhuluma nabe-SuperSport ngemuva komdlalo.
OLUNYE DABA: Asikwazi ukusola ikhefu ngendlela esidlal angayo - Pitso
Le kilabhu sekunesikhathi imataniswa noJeremy Brockie odlalela iSuperSport United, nokuyinto esiphinde yenzeka futhi njengoba sekuvulwe iwindi lokuthengiselana ngabadlali. UPitso uvumile ukuthi ukuthi kungase kube nabadlali abahambayo kubona.
“UJeremy ungowenye ikilabhu. Ngakho kuzomele ngiyihloniphe iSuperSport United. Ngeke ngikwazi ukukhuluma ngoJeremy,” kusho umqeqeshi weDowns.
“Singase silahlekelwe (abadlali) ngoba lesi yisikhathi sokuthengiselana. Sizolahlekelwa abathathu noma abane. Ngeshwa, sinesikwati esincane sabadlali abangu-24. Abantu bazi ukuthi iSundowns inabadlali abaningi kodwa sinabadlali abangu-24 kanye nonozinti abane.
“Ngakho sizobona ngoba noThela (Ngobeni) ufuna ukuhamba ayodlala kwenye indawo, kodwa kuzobonakala,” esho.